के तपाई अर्को मत्ती हुनुहुन्छ? | Lost Sheep for Christ
के तपाई अर्को मत्ती हुनुहुन्छ?
मत्ती 9:9-13-येशू येशू त्यहाँबाट जानुभयो, तिनले मत्तीको नाममा एक जना मानिसलाई करदाता कलेक्टरको बूथमा बसे। ‘मलाई पछ्याउनुहोस्’, उनले उसलाई भने, र मत्ती उठ्यो र उहाँको पछि लागे। येशू मत्तीको घरमा खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो, धेरै कर करदाताहरू र पापीहरू आए र उहाँलाई र उहाँका चेलाहरू खाए। जब फरिसीहरूले यो देखे, तिनीहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, ‘तिमी किन शिक्षकले कर सङ्कलन र पापीहरूसँग खाना खाए?’ यो सुन्नु, येशूले भन्नुभयो, ‘यो स्वस्थ छैन जो डाक्टर चाहिन्छ तर बिरामीहरू छन्। तर जानुहोस् र यसको अर्थ के हो सिक्नुहोस्: “म कृपा चाहन्छु, बलिदान गर्दिन।” किनकि म धर्मीहरू, पापीहरूलाई बोलाउन आउँदैन। ‘
कसैलाई सजिलै संग आफैलाई भन्न सकिन्छ, “यदि येशूले मलाई बोलाउनुहुन्छ, म जान्छु र उहाँको चेला बन्न तयार छु।” तर ईमानदार हुनुहोस् आफैलाई, के तपाईं साँच्चै ख्रीष्टको पछि लाग्न सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? अतीतले भौतिक सामान जस्तै पैसा वा प्रसिद्धि वा कुनै पनि भौतिक वस्तुहरू प्रदान गरौं। त्यहाँ पुरुष र स्त्रीहरूको थुप्रै उदाहरणहरू छन् जसले गरीबलाई प्रभुको सेवा गर्न रोजेको छ। त्याग्ने सबै भन्दा कठिन कुरा नियन्त्रण हो। हामी हाँ भन्न सक्छौं, म भगवानमा विश्वास गर्छु, तर …। हामी स्टीयरिंग व्हीलको नियन्त्रणमा महसुस गर्न चाहन्छौं। मलाई लाग्छ यो गर्न को लागि रहस्यमय कुरा हो। यो मानव प्रकृति को केहि नियन्त्रण गर्न चाहान्छ। के तपाई पिउन वा खान्छु? तपाईं आफ्नो परिवार संग के गर्ने योजना, काममा समय आदि। हाम्रो जीवन आज समय र नियन्त्रण मा केन्द्रित छ। यो जीवनको एक अंश बन्छ।
मलाई यो अनुच्छेद टुक्रा टुक्रामा तोड्न अनुमति दिनुहोस्। म येशूको प्रतिक्रियामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। हामी जान्दछौं र विश्वास गर्दछौं कि उहाँ परमेश्वर पिताद्वारा पठाएको हो। हामी जान्दछौं कि यो समयमा इजरायल वरपर सुसमाचार प्रचार गर्दै र मान्छेलाई उहाँको पछ्याउन पुर्याइरहेको छ। जब येशू हिँडिरहनुभएको थियो र यो मानिस टाढाबाट हेर्नुभयो, तपाई के सोच्नुहुन्छ कि मालिकको प्रतिक्रिया थियो? के उनले यस्तो मानिससँग घृणा गरे? करकर्ता कलेक्टरहरू सामुदायिक समुदायका साथ राम्रो थिएनन् किनभने तिनीहरू रोमन कब्जाकर्ताहरूका लागि पैसा संकलन गरिरहेका थिए। होइन, येशू आफ्नो हृदयमा पहिले नै थाह थियो कि मत्तीले अयोग्य महसुस गरे भगवानको पछि लाग्न। येशू ख्रीष्टलाई यस मानिसलाई प्रेम र दयालुसँग सुरू गर्नुभयो। उहाँ मायाको साथ माथ तिर हिँड्नुभयो र उसलाई आफ्नो गुनासोमा लैजान चाहन्थे। मत्तीले यस्तो शक्तिशाली, अयोग्य व्यक्ति महसुस गरेको हुन सक्छ जो बोल्न थालेको थियो। म कल्पना गर्न सक्छु कि शायद, आफ्नो हृदय को गहिरो गहिराईमा उहाँ जान्नुहुन्थ्यो भगवान बोल्न थाल्नुभयो। ख्रीष्टको शक्ति यो पापीमा देखाइने थियो। येशू बोल्नुभयो र भन्नुभयो, “मलाई पछ्याउनुहोस्”। मत्तीले येशूलाई सोध्नुभएन, “तिमी को हो?” “मलाई किन पछ्याउनुपर्दछ कसैलाई म पनि थाहा छैन” उसले यस मानिसलाई चुनौती दिन एक सय र एक फरक कारणहरू हुन सक्छ। उसले गरेन। उहाँले उठ्नुभयो र उनको पोष्ट छोड्नुभयो र उनको पछि लागे।
मत्तीले येशूलाई आफ्नो घरमा निम्तो दिए। यस घटनाको कुन चलचित्रमा तपाईंले आफ्नो जीवनमा हेर्नुभएको हुन सक्छ, तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि फरिसीहरू पहिले नै यसको बारेमा उजुरी गरिरहेका छन्। “यो मान्छे कसरी आफैले रबबीलाई बोलाउन सक्छ, यी मानिसहरूसँग खान र पिउन सक्छ?” यी “अयोग्य, खराब मान्छे”। के तपाइँ आफ्नो जीवनमा कुनै “फरिसीहरू” हुनुहुन्छ? तपाईंले निर्णय गर्नुभएको व्यक्तिलाई भेट्नुभयो भने, आत्मनिर्धारित धर्मी व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको स्तरमा नभएका भन्दा भन्दा राम्रो छन्? तिनीहरू पनि ईर्ष्या हुन सक्छन्, किनकि येशू “पापी” र “धर्मी” हो भन्ने सट्टा पापीहरूसित खाना खान गए। येशूले के गर्नुभयो? उहाँले यो सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्छ। मत्तीले यस्तो महसुस गरे कि यो महान् शिक्षकले उसलाई बोलाउनेछ, उनले येशूलाई सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव दिए। उहाँले राम्रो खाना, उत्तम पेय, घर मा सर्वश्रेष्ठ सिट प्रदान गर्नुभयो। उहाँले कसरी येशूले देखाउनुभयो सम्मानको उच्चता।
येशूले भन्नुभयो कि उहाँ धर्मीहरूलाई बोलाइनुभएन, तर पापीहरूलाई रूपान्तरण गर्न। पहिलो चरण सबै कुरालाई भगवानमा समर्पण गर्ने हो। तपाईलाई साँच्चै मर्नु पर्दछ, अन्यथा परमेश्वरको वचनमा खुल्यो। हामी सबै भन्दा डर लाग्छ कि चीजहरू जान्न सिक्नैपर्छ। हामी मौखिक रूपमा भन्न सक्छौं, “म तपाईंको जीवनलाई तपाईंसंग समर्पण गर्दछु”, तर यदि तिमी आफ्नो हृदय संग आत्मसमर्पण गर्दैनौ भने, तिम्रो अचम्म। तपाईं साँचो स्वतन्त्रता अनुभव गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। प्रभुको कलको जवाफ दिएपछि, तपाईं येशूलाई आफ्नो हृदय र जीवनमा निमन्त्रणा दिनुहुन्छ, तपाईंले स्वर्गबाट ​​ताजा भित्तालाई तपाईंको हृदय पुग्न र सृष्टिकर्ताले तपाईंलाई काम गर्न अनुमति दिन सक्नुहुनेछ। हामी सबै बिरामी छौं। यो शारीरिक बीमारी छैन, तर एक आध्यात्मिक। जब हाम्रो प्राणमा बिरामी छ, हाम्रो शरीर र दिमाग पीडित हुन्छ। हामी पवित्र आत्माको आवाजमा खोल्न सक्दैनौं, र यसले तपाईंलाई बोलाउनुहुने ईश्वर सुन्न सजिलो बनाउँछ। ख्रीष्टले फरिसीहरूलाई बताउँदै “दया” उहाँको सृष्टिको आध्यात्मिक भइरहेको छ। धर्मी धेरै रूपहरूमा देखाउन सकिन्छ। भोटेको खाना खाएर, नग्न वा आर्थिक रूपमा उनीहरूको आवश्यकतालाई सहयोग पुर्याउँदछन्, हाम्रो दैनिक जीवनमा ख्रीष्टको नकल गर्ने दैनिक अवसर छ।
मैले महसुस गरें यो तीन दिन अगाडी गहिरो कल। परमेश्वरले मलाई यो यात्राको नेतृत्व गर्नुभयो। प्याज छाडेर, उसले मेरो सबै जीवनलाई छाडेको छ। हालैमा 2016 मा अहिले सम्म। भगवानले मलाई भेटेका थिए। धन्य पवित्र स्थानमा दुई दिन बिताएपछि, परमेश्वरले मेरो हृदयको गिलास तोक्न सक्नु भएको थियो, जसले मलाई साँच्चै पछ्याउन अनुमति दिनुभयो र मेरो व्यक्तिगत स्थानको लागी आज्ञाकारी हुनुभयो। भाइहरू र बहिनीहरू, हामी अब हामी नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनौं कुराहरूमा पर्दैन। यदि हामी साँच्चै सिद्ध हुन चाहन्छौं भने, आफैलाई ईश्वरलाई क्रूसमा पार्नुहोस् र उहाँले आफ्नो हृदय र आत्मामाथि आफ्नो ज्योति देखाउनुहुनेछ। केवल परमेश्वरले मार्फत, उहाँको महिमा महसुस हुनेछ। उहाँलाई सट्टा पथ जस्तै सेन्ट मैथ्यू जस्तै तपाईं एक साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबै अयोग्य प्राणी छौं, तर ख्रीष्टको वरिपरिका साथ उहाँ हामीलाई संसारमा सुसमाचार सन्देश फैलाउन सक्नुहुनेछ। आत्माको रूपान्तरण र अन्य पुरुषहरूको मुक्तिको लागि। बलियो हुनुहोस् र मत्ती जस्तै, कलको जवाफ दिनुहोस् र मेरो भाइबहिनीहरू फिर्ता नहोला। फिर्ता नदेखाउनुहोस्!
← Czy jesteś następnym Mateuszem?
Why Is the Rosary so important to pray? →